Maungtintyin: အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့
စစ်ပွဲကို ဘယ်လိုဆင်နွှဲရမယ်ဆိုတာကို သင်ကြားပေးတဲ့ အတည်တကျသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ တက္ကသိုလ်, ကောလိပ်များနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများကတော့ ရှားပါးပြတ်လပ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်သူက သင်ပေးမှာလဲ? ငြိမ်းချမ်းရေးရှု့ထောင့်မှ ပဋိပက္ခများကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရှု့ကြည့်မလဲဆိုတာကိုကော ဘယ်သူက သင်ပေးမှာလဲ?
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များက ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားပေးပါတယ်။
ခေတ်ရေးစီးကြောင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀ိဇ္ဇာ, သိပ္ပံတို့ရဲ့ တသီးတသန့် ကွဲပြားခြားနားနေခြင်းက ပဋိပက္ခနဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုများဆီသို့သာ ဦးတည်နေပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရများဟာ ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ၀န်ကြီးဌာနများနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများကို နှစ်မြှုပ်ထားပြီးပါပြီ။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားဖို့အတွက်ကိုတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ညွန်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။
တကယ့်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်နေခြင်းအဖြစ် စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒကို သိရှိထားကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အစိုးရတွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အားနည်းတဲ့မဟာဗျူဟာအဖြစ် စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒကို ရှု့မြင်သဘောထားကြလို့ပါ။ တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံး လုပ်နည်းလုပ်ဟန် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။ စစ်ပွဲအနေဖြင့်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးအနေဖြင့် ရပ်တည်ပေးဖို့ ရဲဝံ့တဲ့သတ္တိ များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
အစိုးရများမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်မှုက ဘာများပါလဲ? အစိုးရတွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားပေးတဲ့သူများကို တန်ဖိုးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အစပထမဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားဖို့ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ရဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဘေးဖယ်ထားဖို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာများနဲ့ မြို့ပြအဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားများအတွက် ကာလကြာရှည်စွာ အချိန်ယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပူးပေါင်းပါဝင်အုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသွင်သဏ္ဍန်မှာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအဖြစ် အစိုးရမှ အစကနဦး လိုက်ပါလာတဲ့အခါ ထိရောက်မှုက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို အပြည့်အ၀ ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဆိုတာပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အောက်ခြေ လူတန်းစားအထိ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျိုးစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကလေးများရဲ့ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
တိုင်းမ်ဖောင်းဒေးရှင်း (Times Foundation)မှာ တာဝန်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားပေးဖို့နဲ့ အဲဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ ကြိုးပမ်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် World Wisdom Centre-မှ တဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ေးပးဖို့ လိုအပ်ချက်အရ ပြည်သူလူထုအသိကို ဖန်တီးပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Teach Peace-လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုးကြားတက်ကြွမှုအတွက်၊ Alliance foraNew Humanity- ကို အားကောင်းစေဖို့၊ တစ်နေ့တာအတွင်း အားလပ်တဲ့အချိန် သူတို့ရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို တွေ့ဆုံနိုင်အောင် လုပ်ပေးဖို့ အကျွန်ုပ်တို့က လူအများကို မေတ္တာ ရပ်ခံနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို သင်ကြားဖို့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အကျွန်ုပ်တို့ ဘာ့ကြောင့် လိုအပ်သလဲ? ဘာသာရေးကျမ်းဂန်များမှာ ခြားနားမှုလို့ပြောတဲ့အရာများက ပဋိပက္ခသို့ ဦးတည်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အများပြည်သူများကို တွေ့ရှိဝင်ဆံ့ဖို့ လိုအပ်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဘုံအကျိုးစီးပွါးအတွက် သူတို့ကို မီးမောင်းထိုး အသားပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများက တသားတည်းဖြစ်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို ယူဆောင်လျက် လူသားအသိကို တိုးချဲ့ပြန့်ကားလာခြင်းဆီသို့ တပြိုင်တည်း ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် လျပ်စစ်မီးဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာစမ်းသပ်တီထွင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာဟာ အလင်းရောင်နဲ့ အပူကို ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တီထွင်တဲ့လူ, နေရာများမှာသာ ကန့်သတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရာများဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ လူအများအတွက် ရနိုင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒေသနာတော်များဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူဖို့ အဲဒီအရာများမှာ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာသာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့နောက်လိုက်များအတွက်မျှသာ မဟုတ်ပါ။ ညီညွတ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူ နေထိုင်ဖို့ လူတိုင်းအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြောဆိုမှုက အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်ညွှန်းတဲ့အခါ အဲဒါဟာ အရေးပါ အဖိုးတန်ပါတယ်။ နောက်ကျမှသာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်စုတစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အကျွန်ုပ်တို့ သဘောပေါက်တဲ့အနေနဲ့ ညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလျှက် ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို အဲဒါက ကူညီပါလိမ့်မယ်။ Teach Peace-ဟာ Deepak Chopra’s Alliance foraNew Humanity နဲ့ အခြားကျော်ကြားတဲ့ဆရာများ၊ ဂုရုများနှင့်အတူတကွ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် စောင့်မျော်နေတဲ့ အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ Peace Alliance Spiritual Masters-တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ဖို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အကယ်ဒမစ်များ၊ စင်တာများ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ချစ်မြတ်နိုးဖို့၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းမှတဆင့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းဖို့၊ သီအိုရီထက် သင့်လျော်တဲ့ လက်တွေ့မှာ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ဒါတွေအတွက် လူအများကို လေးကျင့်ပေးဖို့ တစ်ခုတစ်လေမျှ မရှိပါဘူး။
ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်မလဲ၊ ဘာသာတရားတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတိုင်းကို ဘယ်လို လေးစားမြတ်နိုး တန်ဖိုးထားမလဲ-ဆိုတာကို လေ့လာသင်ယူခြင်းမှ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စွမ်းရည်ပါရမီများဟာ ကလေးဘ၀မှ စလို့ ပြောကြားပေးဖို့ စိတ်ထဲစွဲမြဲအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့သားရဲ့ ရည်မှန်းချက်ခရီး ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိခြင်းဆိုင်ရာ ခြားနားတဲ့နည်းလမ်းများစွာ ရှိတယ်ဆိုတာ - စံထားရလောက်သည့်အထိ ကလေးများဟာ သင်ယူသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအရာဟာ အဆုံးမှာတော့ တစ်ခုတည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ - အဆုံးစွန် အထွတ်အထိပ် တွေ့ကြုံခံစားရသည့်တိုင်အောင် ကလေးများဟာ သင်ယူသင့်ပါတယ်။
အကျွနုပ်တို့အပြင် အကျွနုပ်တို့မှာ ဘာများရှိပါသေးသလဲ? အကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးက “ အကျွန်ုပ်တို့”–“ ငါတို့ ” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းလမ်းများ ကလေးများကို သင်ကြားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပဋိပက္ခများအတွက် အနည်းငယ်မဆိုသလောက်နေရာရှိတယ် ဒါမှမဟုတ် အခန်းနေရာမရှိဘူးဆိုတာ Teach Peace-က ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းလမ်းများကို ပြသပါလိမ့်မယ်။ Teach Peace - ဟာ အားလုံးနဲ့သဘာဝအကြား ညီညွတ်မှုနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်မှုကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, November 11, 2010